Nobahanana Ny Tranonkala Media Sosialy Tao Kazakhstan Tamin’ny Faha-25 Taonan’ny Fahaleovantenany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2016 6:32 GMT
Vakio amin'ny teny Magyar, русский, English, polski, عربي, Español, Français, English
Tamin'ny Zoma nankalazana ny faha-25 taonan'ny fahaleovantenan'i Kazakhstan avy amin'ny Firaisana Sovietika, nitatitra ireo mpikatroka fiarahamonim-pirenena fa tranonkala media sosialy maromaro no nobahanana tao amin'ny firenena, anisan'izany ny Facebook, YouTube, Instagram ary ny Google. Niresaka tamin'ny mponina tao amin'ny tanàna Kazakh efatra—Astana, Almaty, Karaganda, ary Atyrau ny mpanangom-baovao TJournal—izay samy nanamarina daholo fa tsy afaka niditra tao amin'ireo sehatra media sosialy ireo intsony, kanefa tsy naharay hafatra milaza fa nosakanana ny tranonkala. Mandritra izany fotoana izany, afaka nidirana nandritra ny tontolo andro kosa ny tranonkala media sosialy malaza hafa, toy ny Twitter sy ny VKontakte.
Nakatona ho fanomezam-boninahitra ny faha-25 taonan'ny fahaleovantenan'i Kazakhstan ny@Facebook, @YouTube, ary @Instagram.
Fetin'ny Fahaleovantena [nialana] amin'ny media sosialy
Mila Vonjy! Tsy tafiditra media sosialy izahay ato #Kazakhstan
Nilaza ny Minisiteran'ny Fampahalalam-baovao ao Kazakhstan fa nakatona ny tranonkala noho ny “antony ara-teknika”, ary nampanantena hamerina azy ireo amin'ny laoniny tsy ho ela izy.
Na izany aza, nanondro ny fandefasana mivantana ny antsafa natao tamin'ny mpanao politika mpanohitra Mukhtar Ablyazov tao amin'ny Youtube ireo mpikatroka, izay nilazan'i Ablyazov fa natao hamerana ny fipariahan'ny hafatra nataony ny fibahanana ny media sosialy. Navotsotra tao am-ponja tao ambanivotr'i Paris i Ablyazov tamin'ny 9 Desambra rehefa nandà ny fangatahan'i Rosia hampodiana azy hotsaraina ny fitsarana Frantsay, tadiavina i Ablyazov noho ny fiampangana azy amin'ny fanodikodinam-bola. Miatrika fiampangana ao Kazakhstan sy Okraina ihany koa izy.
Nanjakan'ny herisetra ny Fetin'ny Fahaleovantenan'i Kazakhstan taloha: tamin'ny taona 2011, mpanao fihetsiketsehana am-polony mahery no namoy ny ainy noho ny fifandonana tamin'ny polisy tao an-tanànan'i Zhanaozen.
Indraindray bahanan'ny governemanta Kazakh ny tranonkala media sosialy mba hampitsaharana ny hetsi-panoherana sy hamerana ny fikasan'ny mpanohitra hikarakara hetsika. Vao haingana indrindra tamin'ny volana Mey, nobahanana ny fidirana tamin'ny tranonkala media sosialy rehefa nanao fanentanana manerana ny firenena ireo mpitarika mpanohitra ho fanoherana ny fanovana ny fehezan-dalàna mifehy ny [fanajariana ny] tany ao amin'ny firenena .